Kọntaktị na ha yiri ọmụma ndị dị oké mkpa maka ihe ọ bụla onye ọrụ dị ka ọ bụ ihu ọma na-eji jikọọ na ndị na-mara. Ọ bụkwa ihe biakwa obibia eziokwu na adịkwa ozi kọntaktị bụ ihe na-ewere dị ka ihe egwu ọnwụ na maka otu ihe dị iche iche na usoro e mepụtara na nke a iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe ihu. A nkuzi bụ ihe niile banyere ebufe kọntaktị na yiri nkọwa na kọmputa na-eme ka n'aka na ọ bụghị nanị na a ndabere na-kere ma ha anọgide na-nchebe dị ka mma.
Nkebi nke 1: Iji kaadị SIM na iTunes
Part 2: Jiri free ngwa My Ndi ana-akpo ndabere
Part 3: Iji iCloud na Gmail
Part 4: Iji Wondershare TunesGo Ochie
Part 5: My mgbaru ọsọ bụ ime ka a azụ elu nke m iPhone kọntaktị, ọkacha mma na a biri ebi ndepụta
Ọ bụ a usoro na ike ga-eji ọtụtụ ebe enweghị ihe ọ bụla nke na ma1.The ekwentị bụ na-jikọọ na PC.ke n'aka na nkwado ndabere na mpaghara nke kọntaktị na-kere na PC ma ọ bụ Mac. The ugbua arụnyere IOS software omume na nke a na-enye aka na maka otu ihe ahụ ihe ọhụrụ na-achọrọ. Iji nweta lekwasịrị na kacha n'ụzọ ndị ọrụ na-chọrọ ijide n'aka na usoro na e kwuru ebe a na-soro nzọụkwụ site nzọụkwụ zere ihe ọ bụla aghara ma na nke.
2.The iTunes software na-ahụ na-oru.
3.Once software omume e nwere agbam onya ekwentị bụ na-emi odude site na ịpị mkpa akara ngosi.
4.After ịnweta ntọala nke iPhone taabụ ma ọ bụ nhọrọ nke "Mail, kọntaktị na kalịnda" a ga-tapped.
5.The nhọrọ nke ibubata kọntaktị SIM bụ na-tapped mgbe ahụ.
6.The Ama icon bụ na-tapped na iTunes ẹkedori menu ebe kọntaktị syncing nhọrọ a dị.
7.On ọzọ ihuenyo onye ọrụ mkpa ijide n'aka na na "mmekọrịta Address akwụkwọ na Ndi ana-akpo" na-ahọrọ na mmekọrịta button na-enwe na ala nke ihuenyo ka mezue usoro.
Na iji ngwa dị nnọọ mfe ma N'ihi ya, ndị ọrụ nwere mgbe niile gosiri ya elu dị ka naanị ole na ole taps dị iji jide n'aka na kọntaktị ndabere na-kere n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime nzọụkwụ aka iji hụ na-eji ire ụtọ nhazi nke ọrụ na nke a.
1.The ngwa nwere ike ibudatara na URL https://itunes.apple.com/us/app/my-contacts-backup/id446784593?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 na ntụziaka na-ga-agbaso iji wụnye ya. Ozugbo ọ na-eme ngwa bụ na-tapped iji jide n'aka na isi interface-egosi.
2.Now onye ọrụ kwesịrị ka enweta nkwado ndabere na mpaghara button iji jide n'aka na usoro amalite na mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ntuziaka na-agbaso.
3.The ngwa ga itinye na kọntaktị na ụdị nke a vcard na ga-ahụ na ndabara email ọrụ na-eji na ga-ajụ maka email adreesị ebe kọntaktị a ga-zitere. Ozugbo onye ọrụ pịa okokụre kọntaktị ga-agafere adreesị ozi-e na usoro okokụre.
Nkebi nke 3: Iji iCloud na Gmail
Usoro a nke kọntaktị ndabere bụkwa mfe iji. Na isoro usoro ndị a kpọrọ aha n'okpuru kpọmkwem otu iji ga-atọ n'ihi na onye ọrụ n'ime oge ọ bụla ma ọlị.
1.The iCloud taabụ bụ na-tapped mgbe ntọala nke iPhone na-enweta.
2.Against kọntaktị taabụ onye ọrụ kwesịrị na-atụgharị bọtịnụ na na enweta jikota na-esote na ihuenyo.
3.Now onye ọrụ kwesịrị ileta website www.icloud.com na nbanye na nkọwa.
4.The kọntaktị icon bụ na-tapped na-esote na ihuenyo.
5.The cog icon, a ga-tapped na site na nke pụrụ ịkpata menu nhọrọ nke bupu V kaadị bụ na-ahọrọ.
6.This vCard faịlụ a ga-azọpụta na kọmputa.
7.The dobe akụ megide Gmail icon ozugbo pịa ga-onye ọrụ na-a menu si ebe nhọrọ nke kọntaktị a ga-pịrị.
8.The vCard faịlụ na a zoputara mbụ na usoro nwere ike dị iji na-esote window.
9.The iPhone kọntaktị nwere ike anya na Gmail dị ka ndị a.
Nkebi nke 4: Iji Wondershare TunesGo Ochie
1.The software omume nwere ike ibudata na arụnyere si URL http://www.wondershare.com/mac-ios-manager/ na ozugbo ọ e ọma arụnyere na ọ bụ-oru.
2.On ekpe akuku njirimara kwesịrị pịa kọntaktị iji jide n'aka na usoro na-aga na ziri ezi.
3.The software ga iṅomi ngwaọrụ maka ihe ọ bụla na kọntaktị na ga-egosipụta results.
4.On n'elu nri akuku e nwere otu nhọrọ nke oyiri ka iTunes nke a ga-pịrị.
5.All kọntaktị ga-depụtaghachiri ka iTunes software nke Apple Inc. si ebe onye ọrụ nwere ike hụ na ndị kọntaktị na-synced na kọmputa mere na ndị niile vCard faịlụ na-azọpụta jidesie usoro na ha ndabere na-kere-akpaghị aka.
The My Ndi ana-akpo ndabere ngwa e enyocha ke oké zuru ezu na nke a nkuzi na ọ nwere otu nke egwu atụmatụ nke-azọpụta kọntaktsị na ụdị vCard faịlụ nke nwere ike mgbe a ga-eji na-ebipụta na kọntaktị na mfe n'ụzọ. Nanị mmezi ngwaike a ga-mmasị na nke a bụ na ngwa nbipute nke na-eji n'ịwa ike mbipụta nke kọntaktị na a zọpụta na ụdị nke vCard faịlụ. The obibi akwụkwọ usoro bụ pụtara dị mfe na mgbe emeghe vCard faịlụ onye ọrụ dị nnọọ mkpa ka pịa Ctrl + P imeghe ebipụta window wee họrọ Bipute iji jide n'aka na-arụsi ike mbipụta na-kere enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
> Resource> iPhone> 5 ụzọ banyere otú nyefee kọntaktị site na iPhone na kọmputa